Manjaro Linux yekuisa gwara | Linux Vakapindwa muropa
Mhoroi varume, panguva ino ndichakuratidzai maitiro ekuisa Manjaro Linux, inova sisitimu yakatorwa kubva kuArchLinux uye imwe yandinoda zvakanyanya uye ini ndinotokurudzira vema newbies uye vanoziva kuti chii kuva nekutonga kwechokwadi kweiyo system
Manjaro Linux yakavakirwa paArch Linux, asi ine yayo seti yezvinyorwa. Kugovera kunovavarira kuve mushandisi zvine ushamwari kuchengetedza hunhu hweArchsenge Pacman package maneja uye rutsigiro rweAUR.
Manjaro Linux iri kugoverwa kweGNU / Linux ine kugona kusarudza ndeipi mushandisi interface nekutadza Ichadzorwa uye kuiswa, zviri pamutemo ine XFCE, KDE, Gnome, Cinnamon nevamwe vazhinji vakapihwa nharaunda.
Iyo iri yemahara inoshanda sisitimu yekushandira yako wega makomputa uye yakanangana nekureruka kwekushandisa. Sezvo Manjaro yakavakirwa paArch Linux, ino sisitimu zvakare inoshandisa yekuvandudza modhi inonzi Rolling Kuburitswa.
2 Maitiro ekuisa Manjaro Linux
2.1 Mutauro uye Nzvimbo
2.2 Sarudza nzira yekuisa.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kurodha pasi Manjaro ISO uye kuchinjisa kune CD / DVD kana USB drive, isu tinoita kurodha pasi kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti. chinongedzo apa.
Tinogona kurodha pasi iyo ISO kubva kurodha yakananga kana kuburikidza neTorrent.
Windows: Tinogona kupisa iso neImgburn, UltraISO, Nero kana chero chirongwa chero vasina ivo muWindows 7 uye gare gare inotipa sarudzo yekukiya kurudyi pane iyo ISO.
Linux: Iyo yakakurudzirwa sarudzo ndeyokushandisa iyo dd yekuraira, iyo yatinotsanangudza munzira ipi yatinayo iyo Manjaro mufananidzo uye zvakare mune iyo nzvimbo yepamusoro iyo isu yedu usb:
Maitiro ekuisa Manjaro Linux
Kana iyo system yabviswa, isu tichaenderera nekumisikidza kweManjaro Linux, chinhu chekutanga kuita kusarudza mutauro, kwatiri uchave uri muchiSpanish.
Tichaita izvi nekutsikirira iyo F2 kiyi uye nekusarudza mutauro.
Iye zvino isu tichatanga Manjaro uye kumirira kuti iyo system itakure.
Kana iyo system yatanga, icharatidza yekugamuchira skrini ine ruzivo nezve Manjaro Linux, isu tichafanirwa kumirira iyo kuti ipedze kurodha zvese kusvikira isu tiri mukati meiyo system nharaunda.
Iye zvino zvatichaita kuvhura menyu uye nyora "gadza" kuti ugone kutsvaga uye kuvhura iyo inosimudza, ingotinya pane yekutanga sarudzo iyo yainotiratidza kuti tiite.
Mutauro uye Nzvimbo
Isu tichasarudza yedu yekuisa mutauro mune yedu ichave iri muchiSpanish.
Iye zvino zvichatibvunza isu kwenzvimbo yedu.
Tevere, ichatikumbira isu kusarudza yedu keyboard dhizaini uye mutauro, pano isu tichafanirwa kuitsvaga nemutauro uye pakupedzisira tigoziva kuti iyo kiyi kiyi inowirirana yedu yemuviri keyboard.
Iye zvino zvinongotitaridza ruzivo rwezvino nezve chimiro chedu chekumisikidzwa kweManjaro Linux pakombuta yedu.
Zvino nekukurumidza mumashure izvo zvichatibvunza isu nzira iyo Manjaro Linux ichaiswa pane komputa yedu, pano isu tinofanirwa kuita basa resarudzo.
Bvisa diski yese kuisa Manjaro Linux
Isa Manjaro Linux pamwe chete nemamwe masisitimu anoshanda kana uchitova nayo.
Dzimwe sarudzo, zvinotibvumidza kuti tigadzirise zvikamu zvedu, kudzikamisa dhisiki, kudzima zvikamu, nezvimwe. Iyo yakakurudzirwa sarudzo kana iwe usiri kuda kurasikirwa neruzivo.
Mushure meizvozvo isu tinosarudza chikamu chekuisa Manjaro Linux kana kusarudza iyo yose hard drive. Muchiitiko chekusarudza chidimbu tichafanira kuchipa chimiro chakakodzera, nekudaro tichiramba seizvi.
Tora chikamu "ext4" uye mount point semudzi "/" ..
Iye zvino zvinongotibvunza isu kuratidza mushandisi pamwe nephasiwedi kuti tikwanise kuwana Manjaro Linux pese patinovhura komputa pamwe nephasiwedi iyo ichizoshandiswa kumushandi wepamusoro.
Uye ndizvozvo, iwe unotofanira kumirira kuti upedze kuisirwa uye kutanga kunakidzwa neManjaro Linux
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Manjaro Linux yekuisa gwara
Mhoroi, maita basa nechinyorwa, asi chadarika yechinyakare, nekuti zvinyorwa zvacho zvinobva mushanduro 16.06 yakabuda muna Chikunguru wegore rapfuura uye yazvino iri 17.06, mukuwedzera uye zvinoenderana nekutora kwaunoshandisa iyo yekumisikidza, iyo haichawanikwi, squid installer yava kushandiswa. Uye kusarudza mutauro neF2, zvaingova chete kana iwe usina kutanga neefi, ikozvino kana ukatanga neefi izvo zvinobuda zvakasiyana zvachose, ini handina kuzviedza ndisina uefi nguva pfupi yadarika. Usati wawana zvishoma.
Chinyorwa chakanaka, asi ini ndinofunga chiri pamusoro peiyo yepamusoro, haina kudzika. Huya, zviri nyore kwazvo.
Ini handina kuwana iyo%%% kuiso ... ivo vanongopa info !!! (https://manjaro.org/download/
NDAKAISA UBUNTU 18.04 CHII CHANDINOFANIRA KUITIRA KUTI NDIMISE MANJARO